January 6, 2021 - Factcrescendo Myanmar
မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ပရာဘွမ်-ပူတာအိုကွန်ကရစ်လမ်း ဖောက်လုပ်ရာမှာ ကွန်ကရစ်အတွင်း သံချောင်းတွေအစား ဝါးလုံးတွေထည့်ပြီး ဖောက်လုပ်တယ်ဆိုပြီး ပုံနဲ့တကွရေးသားထားတဲ့ပို့စ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပြန်လည်ရေးသားမျှဝေနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီပိုစ်မှာ ဖောက်လက်စကွန်ကရစ်လမ်းရဲ့ လမ်းအတွင်းသားထဲ ဝါးလုံးတွေ စီပြီး ခင်းထားတဲ့ပုံတွေကို “ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ပရာဘွမ်-ပူတာအိုလမ်း ခဂရန်းယန်ကျေးရွာမရောက်မှီမှာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ လမ်းခင်းနေမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဝါးကိုအသုံးပြုပြီး ခင်းလမ်းနေတာဟာ အရည်အသွေးပြည့်မှီပါ့မလား? လမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့ စာချုပ်စာတမ်းမှာရော ဒီလိုဝါးအသုံးပြုဖို့ ချုပ်ဆိုတတ်ကြသလား? အစိုးရရဲ့လမ်း တင်ဒါဒီဇိုင်းမှာရော ဒါမျိူးဒီဇိုင်းတွေရှိပါသလား? သိတဲ့သူများ ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပေးကြပါ။ လေ့လာချင်လို့ပါဗျ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပြီး ဒီနေရာ ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာတွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေတာတွေ့ရပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive link အချက်အလက်စိစစ်ချက် အထက်ပါပို့စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဲ့ဒီလမ်းကို ဖောက်လုပ်နေတဲ့ […]